♥ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ - အရှင်ဝိသုတ-ရေနီ
♥ မသိသူကျော်သွားသိသူဖော်စား website များ
♥ Windows7မှာProgramတွေဖွင့်တိုင်းလာရှုပ်နေတဲ့ UAC (User Account Control)
♥ မိမိတို့g-mail လေးတွေကို လုံခြုံမှုရှိအောင်လုပ်လိုက်ကြရအောင်
♥ Facebook Shortcuts
♥ G Talk ဖုန်းအသံနေရာမှာသီချင်းသံလေးတွေနဲ့ အစားထိုးချင်ရင်
♥ ဗုဒ္ဓဘာသာကို အကောင်းဆုံးသော ဘာသာအဖြစ် ကမ္ဘာက သတ်မှတ်
♥ မိမိဓါတ်ပုံလေးတွေကို Resolution မကျပဲ ချုံ့ နည်း
♥ သင့် Password လုံခြုံစိတ်ချစေဖို့ Browser Cleaner သုံးကြစို့
♥ အမျိုးသမီးတစ်ထောင်ကျော်အား အဓမ္မပြုကျင့်သူ ဖမ်းဆီးခံရ
♥ အာဖဂန်မှ လူမဆန်သောလူသားများ
♥ ကြောက်စရာ gmail hack နည်း
♥ နွားကျောင်းသားများ သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင် အလုပ်ရမည်
♥ကျေးဇူးတော်ရှင် လယ်တီဆရာတော်ဘုရားကြီး ၏ ဗုဒ္ဓ ပူဇာ လင်္ကာ
*ချမ်းမြေ့ဆရာတော် (ဘာသာရေးစံ သာသနာရေး မှတ်ကျောက်)*
Audio CD to wave file ပြောင်းနည်း
blog ဆိုဒ် တည်ထောင်နည်း
Gmail စတိုင်အသစ်တဲ့ ဗျာ တော်တော် လှတယ်
Mail ကို လေဘယ် ခွဲထားခြင်း
Website တည်ဆောက်ဖို့ hosting တွေမှ wordpress ကို install လုပ်နည်းများ
ဆိုဒ်ကြီးသော ဖိုင်များပို့ နည်း....
တရားသိရုံနှင့် မပြီး၊ တရားရှိမှ ပြီးတယ် – အရှင်ဣန္ဒက
နည်းပညာပိုင်ဆိုင်ရာ လေ့လာရန် လမ်းညွှန်
ပုံနဲ့စာသားတွဲထားတဲ့ဖိုင်တွေကို ခွဲထုတ်ကြရအောင်
ဗန်မော်ဆရာတော်၏ ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်သင်တန်း တရားတော်များ
မိခင် အသက်ကို ကယ်ပေးသော တမလွန်မှ သမီးငယ်လေး
မိန်း​က​လေး​များ​​​ ​အ​သက်​​ ​၁၆​​ ​နှစ်​အ​ရွယ်​တွင်​​ ​အိမ်​ထောင်​ပြု​ရန်​​ ​​ အီ​ရန်​သ​မ္မ​တတိုက်​တွန်း
သင်.ကိုယ်ပိုင် google website ပြုလုပ်နည်း
အငှားကားမောင်းသူ ထိုင်းလူမျိုးတဦးက မြန်မာခရီးသည် မေ့ကျန်ခဲ့သည့် ဘတ်ငွေ နှစ်သိန်းကျော်ကို ပြန်ပေး
အွန်လိုင်းပေါ်၌ ခင်မင်သူက သွေးဆောင်ဖျားယောင်း၍ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်လိုက်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
၀င်းဒိုးXP ကို ၀င်းဒိုးမြန်မာ ပြောင်းကြမယ်
♥ ဘယ်နိုင်ငံက မေးလ်ပို့တာလဲ ?
♥ Blockလုပ်ထားခြင်းခံရသော WebsiteများအားProxy Bypassအဖြစ် အသုံးပြုပြီးကျော်ကြည့်ခြင်း
♥ Format Factory (Vedio များကို Mp3, Mp4 ပြောင်းလဲခြင်း)
♥ G-Talk အကောင့်မ၇ှိဘဲ Mail ပိ်ု့ နည်း
♥ G-talk နှင့် G-Mail တွင် မိမိ နာမည် မကျန်ရလေအောင်....
♥ Gmail IP Spy တဲ့ဗျာ
♥ Gmail ကို လုံခြုံရေး တင်းကျပ်ခြင်ရင်..........
♥ Need for speed world ကိုအွန်လိုင်းကနေကစားမယ်
♥ Online တွင် မိမိအကောင့် လုံခြုံရေးအတွက် အဆင့် (၁၀) ဆင့်
♥ ကျန်းမာရေး ဗဟုသုတများ
♥ ထူးဆန်းထွေလာ သတင်းများ
♥ မိမိ အိမ်မှာ flash song လေး တင်ရန် Code ထုတ်နည်း
♥ သီချင်းပလေယာလေးတွေ လုပ်ကြည့်မယ်
♥ အပျိုကြီးများ၏သနားစဖွယ် အားငယ်ရသည့်အချက်များ
♥ အွန်လိုင်းပေါ်၌ ခင်မင်သူက သွေးဆောင်ဖျားယောင်း၍ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် ပြုကျင့်လိုက်သော ဖြစ်ရပ်တစ်ခု
♥ ကျော်ခွလို့ရသည့် ၀ဘ်ဆိုက်များစာရင်း
♥ ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဘယ်လို ကာကွယ်ကုသကြမလဲ
♥Total video converter အသုံးပြုနည်းနှင့် Software
ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိဗိုင်းရပ်(စ် )ပိုးများကိုလည်း တိုက်ခိုက်ရသည် ။
းကို စွန့်ပစ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည် ။
ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် E. coli ​ရောဂါပိုး​တွေ့​ရှိ
ထောပတ်သီးနှင့် ထောပတ်သီးမှ တွေ့ရှိရသော ရောဂါပိုး© dailymail
E. coli ​ရောဂါပိုး​မွှား​များ​ကို ထိုင်း​နိုင်ငံတွင် ​တွေ့​ရှိ​နေရ​ကြောင်း​ ထိုင်း​အစား​အ​သောက်နှင့်​ ​ဆေး​ဝါး​ လုံခြုံ​ရေး​ စီမံအဖွဲ့​ (FDA)က ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။
ဥ ​ရောပတိုက်တွင် လူ​ပေါင်း​ ၃၀ မျှ ​သေ​ကြေ​စေခဲ့​သော ​ရောဂါပိုး​ကို ဥ​ရောပ ယူနီယံမှ တင်ပို့​သော ​ထောပတ်သီး​များ​တွင် ​တွေ့​ရှိခဲ့​သည်ဟု တာဝန်ရှိသူများ​က ဇွန်လ ၁၀ ရက်​နေ့​တွင် ​ကြေညာခဲ့​သည်။
ဓာတ်ခွဲခန်း ​ စမ်း​သပ်ချက်များ​အရ E. coli ဘက်တီး​ရီး​ယား​ ပိုး​မွှား​ကို ​တွေ့​မြင်ခဲ့​ရ​ကြောင်း​ ထိုင်း​ဆေး​ဝါး​သိပ္ပံ ဌာနမှ သု​တေသီများ​ကဆိုသည်။ ထိုင်း​ FDA၏ အ​ထွေ​ထွေ ဒါရိုက်တာ ​ဒေါက်တာ ပီပတ်ယင်ဆာရီက ၎င်းတို့​သည် ​နောက်ထပ် ၅ ရက်ကြာ သု​တေသန ပြုလုပ်ပြီး​နောက် ယခု​တွေ့​ရှိသည့်​ E. coliသည် အလွန်အန္တရာယ်​ပေး​နိုင်သည့်​ O104 အဆိပ်အ​တောက်နှင့်​ ဆက်စပ်မှု ရှိမရှိ အတည်ပြု ​ပြောကြား​နိုင်မည်ဟု ​ကြေညာခဲ့​သည်။
E. coli ဘက်တီး​ရီး​ယား​ ကူး​စက်တိုက်ခိုက်မှု မခံရ​စေ​ရေး​အတွက် လူအများ​အ​နေနှင့်​ လတ်ဆတ်​သော ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်နှင့်​ သစ်သီး​ဝလံများ​ကိုသာ စင်ကြယ်စွာ ​ဆေး​ကြောစား​သောက်ရန် FDAက အကြံပြုထား​သည်။
ထို့ ​အပြင် ​ရေ​ဆေး​ရာတွင် ၂ မိနစ်မျှ အချိန်ယူ ​ဆေး​ကြောသင့်​ပြီး​ ဗီနီဂါနှင့်​ ဆား​တို့​ကိုပါ အသုံး​ပြု​ဆေး​ကြောရန် ညွှန်ကြား​ခဲ့​သည်။ ဟင်း​သီး​ဟင်း​ရွက်များ​ကို ပြုတ်လိုက်ခြင်း​ကလည်း​ E. coliများ​ကို ​သေ​ကြေ​စေပြီး​ ထိုပိုး​မွှား​များ​သည် အပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီ ဆဲစီး​ရပ်တွင် ပျက်စီး​သေဆုံး​သွား​တတ်​ကြောင်း​ သိရသည်။
နွားဦးနှောက်၊ ဆိတ်ဦးနှောက် စားသုံးမှုကို သတိပြုသင့်
နွားဦးနှောက်၊ ဆိတ်ဦးနှောက် အစရှိသော တိရစ္ဆာန်ဦးနှောက်များကို အသေအချာ ကျက်အောင် မချက်ဘဲ စားသုံးခြင်းသည် အန္တရာယ်ရှိကြောင်း အမေရိကန်ရောဂါ ထိန်းချုပ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးဗဟိုဌာန (CDC) က မေလ ၂၃ရက်နေ့တွင် ပြောကြား ခဲ့သည်။
၎င်းတို့မှနေ၍ အလွန်ရှားပါးပြီး ပြင်းထန် သည့် Prion Diseases ဟုခေါ်သော ရောဂါတစ်ရပ်ကို ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။ Prion Diseases ၌ Creutzfeldt Jakob Diseases၊ နာတာရှည် ကြွက်သားချည့်နဲ့သော ရောဂါ၊ Bovine Sponginform encephalopathy (ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ တစ်မျိုး) တို့ပါဝင်ပြီး နွားရူးရောဂါဟု လူသိများသည်။
၎င်းအပြင် ယခုနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက်အရတောတွင်းသမင်၏ အသားကို စားခြင်းသည် လည်း လူကို ကူးစက်စေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရှိရသည်။ Prion Diseases သည် လူ၌ဖြစ်ပွားမှု နည်းပါးသော်လည်း ရောဂါဖြစ်ပွားပါက အသက်သေဆုံးနိုင်ခြေ လွန်စွာများပြားသည်ဟု ဆိုသည်။
အဆိုပါ နွားရူးရောဂါသည် ကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့အပြားသို့ ပျံ့နှံ့လျက်ရှိပြီး များသောအားဖြင့် ဗြိတိန်၊ အိုင်ယာလန်၊ ပြင်သစ်၊ ပေါ်တူဂီ၊ ဆွစ်ဇာလန်၊ အီတလီ၊ နယ်သာလန်၊ ဂျာမနီနှင့် စပိန်နိုင်ငံတို့တွင် တွေ့ရသည်ဟု ဆိုသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ကော်လိုရာဒို ပြည်နယ် အရှေ့မြောက်ပိုင်း၊ ဝိုမင်းပြည်နယ် အရှေ့တောင်ပိုင်းနှင့် နီဘရာစကားပြည်နယ် အနောက်တောင်ပိုင်း တို့တွင် သမင်နှင့် ဒရယ်တို့ကို အမဲလိုက်ကာ စားသုံးသည့် အလေ့ အထ ရှိသောကြောင့် နာတာရှည်ကြွက်သားချည့်နဲ့သည့် ရောဂါ အတွေ့ရများသည်ဟု ဆိုသည်။
Prion Diseases ကို ဖြစ်ပွားစေသော ရောဂါပိုးသည် တော်ရုံအပူချိန်ဖြင့် မသေနိုင်သော ကြောင့် တိရစ္ဆာန်ဦးနှောက်များကို မကျက်တကျက် စားသုံးခြင်းသည် လွန်စွာ အန္တရာယ် များသည်ဟု ဆိုသည်။ ရောဂါလက္ခဏာမှာလည်း ချက်ချင်းမပြဘဲ အဆိုပါ ပိုးမွှား၏ ဗီဇကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေး၍ ကာကွယ်ဆေးလည်း မရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
ငိုတာက ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေသလား
ပြင်းပြင်းထန်ထန် စိတ်ခံစားနေရတဲ့ အချိန်မှာ ငိုတာက ကျန်းမာရေးအတွက် ကောင်းတဲ့ ထွက်ပေါက်ပါ။ ငိုတတ်တဲ့ ကလေးက မုန့်စားရတယ်ဆိုတဲ့ စကားဟာ ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း မှန်ကန်စေ တယ်လို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆရာဝန်တွေက ဆိုပါတယ်။
တကယ်လို့ သင်က ဆုံးရှုံးနာကျင်မှု ကြီးကြီးမားမား၊ ဝမ်းနည်းမှု၊ ဒေါသနဲ့ ဖိစီးမှုတွေ များနေတယ်ဆိုရင် ငိုချင်ရင် ငိုချလိုက်ပါ။
ငိုခြင်းအကြောင်း စာတမ်း ၁၄၀ ကို လေ့လာတဲ့ လေ့လာမှုတစ်ရပ်အရ ငိုတဲ့အကြိမ် ၁၀ ကြိမ်မှာ ကိုးကြိမ်ကျော်က စိတ်ခံစားမှုကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အကောင်းဆုံးနည်းတစ်ခု ဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တိုင်းပြည် ၃၀ ကျော်က အမျိုးသားနဲ့ အမျိုးသမီးတွေကို လေ့လာမှုအရလည်း အားရပါးရ ငိုလိုက်ရမှ စိတ်သက်သာရာ ရတယ်လို့ အဖြေထွက်ခဲ့ပါတယ်။ အထူးကု ဆရာဝန် ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလည်း ငိုတာက သူတို့လူနာတွေအတွက် ကောင်းတယ်လို့ ယုံကြည် ထားကြပါတယ်။
ငိုတာရဲ့ အဓိက ကောင်းကျိုးက ခံစားချက်တွေကို ပြေစေတာပါပဲ။ ငိုလိုက်တဲ့အခါ တင်းအား နဲ့ ဝမ်းနည်းမှုတွေ လျော့ပါးသွားပါတယ်။ လူအများစုကိုလေ့လာမှုအရ ငိုချင်နေရင် ငိုလိုက်တာက စိတ်သက်သာရရသွားကြောင်း၊ အထူးသဖြင့် အမျိုးသမီးတွေ ၁၀ ယောက်အနက် ကိုးဦးက ငိုပြီးတာနဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းသွားကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိ ရပါတယ်။
ငိုတာရဲ့ နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့အချက် လူတွေကို ပိုရင်းနှီးသွားစေတာပါ။ အစ္စရေး လေ့လာသူတွေက မျက်ရည်ကျတဲ့အခါ တခြားတစ်ယောက်ကိုပါ ဝမ်းနည်းမှု မျှဝေသွားပြီး ပြဿနာနဲ့ တင်းမာနေတဲ့ အခြေအနေတွေကို လျော့ကျသွားစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင့်ကို ဂရုစိုက်တဲ့သူက သင်ဝမ်းနည်းငိုကြွေးနေချိန်မှာ သင့်ကို ပိုစာနာနှစ်သိမ့်လာပြီး သင်တို့နှစ်ဦးကြားက သံယောဇဉ်က ပိုကြီးထွားလာနိုင်ပါတယ်။
ငိုခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
ငိုတာက စိတ်ကျန်းမာရေးကို ကောင်းစေတာကြောင့် အားရပါးရ ငိုနိုင်ဖို့အတွက် လမ်းညွှန် ချက်တချို့ကို ပေးလိုက်ပါတယ်။
ငိုနေစဉ်မှာ ဖေးမနှစ်သိမ့်မှုရဖို့နဲ့ စိတ်ခံစားမှုပြေလျော့ဖို့အတွက် တစ်ယောက်တည်း မငိုပါ နဲ့။ သင်ယုံကြည်ရတဲ့ သူတစ်ဦးရဲ့ ပခုံးပေါ်မှာ ငိုပါ။
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးမှ ငိုသင့်ပါတယ်
သင့်ကို ငိုစေတဲ့အထိ ဝမ်းနည်းနာကျင်ရတဲ့ ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပြီးမှ ငိုတာက စိတ်ခံစား မှုအတွက် ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ငိုတာနဲ့တော့ ပြဿနာက ပြေလည်သွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
သင့်တော်တဲ့ နေရာမှာ ငိုဖို့ လိုပါတယ်
သင်ငိုနေတာကို လူတွေဝိုင်းကြည့်မယ့်နေရာမျိုးမှာတော့ မငိုသင့်ပါဘူး။ လူတွေကြားမှာ ငိုလို့ အရှက်ရတာကြောင့် စိတ်သက်သာရာရလာမှာ မဟုတ်တဲ့အပြင် ပိုဆိုးလာပါလိမ့်မယ်။
ငိုတာက စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါကိုတော့ မသက်သာစေပါ
စိတ်ဓာတ်ကျရောဂါ ရှိနေရင် ငိုတာကြောင့် စိတ်ခံစားမှုပိုကောင်းလာနိုင်ခြေ နည်းပါတယ်။ ငိုပြီး စိတ်ခံစားမှု ပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် နှစ်သိမ့်ဆွေးနွေး အကြံပေးသူတစ်ဦးနဲ့ တွေ့ဆုံသင့်ပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ ဇွန် ၇- သွေးတစ် စက်ဖောက်ရုံဖြင့် မိမိခန္ဓာကိုယ် တွင်ဖြစ်ပွားနိုင်သော ရောဂါ များ သိရှိနိုင်မည့် စက်ပစ္စည်းများ ကို LPHA GROUP INT. Health & Care Co., Ltd. က မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးတော့မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းကို မြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာရှင်များ အစည်းအရုံး ဒုဥက္ကဋ္ဌဦးသန့်စင်၏ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် ALPHA GROUP INT. Health &Care Co.,Ltd. မှ အခမဲ့ သွေးဖောက် စစ်ဆေးပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“သွေးတစ်စက်နဲ့ ကိုယ့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိရှိစေပါတယ်။ ဒီစက် ပစ္စည်းတွေက နယူးဇီလန်နိုင်ငံက လာတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေ ကိုယ်တိုင် လာ ရောက်စစ်ဆေးပေးပါတယ်။ သွေးတစ်စက်ကို ဖောက်ယူပြီး ချက်ချင်းစစ် ဆေးပေးပါ တယ်။ စစ်ဆေးချက်ကို တီဗွီပေါ်မှာ တွေ့ရပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံပန်းပညာ ရှင်များ အစည်းအရုံးအတွင်းရေးမှူး ဦးကြည်ဝင်းက ပြောသည်။
“Medical Check up လုပ်ရင် သိန်းချီကုန်ကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆရာကြီး ဦးသန့်စင် မွေးနေ့မှာ အခမဲ့စစ်ဆေးပေးပြီး နောက်ပိုင်းလာရောက် စစ်ဆေးသူများအနေဖြင့် ကျပ် ၂၀၀၀ ပဲကျမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးအပျစ်အကျဲ၊ ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေ အဖြေ ပေးနိုင်တယ်။ ဘယ်လိုရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲ သိလာနိုင်ပါတယ်။
အဲဒီလိုသိရင်ကုသမှုခံ ယူဖို့ သူတို့နိုင်ငံထုတ်ဆေးတွေ ရောင်းချပေးပါတယ်။ လက်ရှိ လုပ်ငန်းမထိခိုက်ဘဲ မန်ဘာဝင်များအဖြစ် ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်” ဟု ALPHA GROUP INT. Health & Care Co.,Ltd. မှ ဒေါ်နှင်းနှင်းဦး(Medical Research) က ပြောသည်။
နစ်ကိုတင်း​ဓာတ်ဖြင့်​ အဝလွန်မှုတိုက်ဖျက်​ရေး​နည်း​လမ်း​ သိပ္ပံပညာရှင်များ​ ​တွေ့​ရှိ
ဆေးလိပ်တစ်ဖွာ ဉာဏ်တစ်ထွာ ဆိုပေမဲ့ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်းသည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်နိုင်သည်© dailymail
သိပ္ပံပညာရှင်များ​က နစ်ကိုတင်း​ဓာတ် ဖြည့်​သွင်း​ပေး​ခြင်း​ဖြင့်​ အဝလွန်မှုကို တိုက်ဖျက်နိုင်သည့်​ နည်း​လမ်း​တစ်ခုအား​ သု​တေသနပြု ​တွေ့​ရှိခဲ့​သည်။
ဆေး ​လိပ်​သောက်သူများ​၏ ဦး​နှောက်အတွင်း​ အစာစား​ချင်စိတ်ကို ဖြစ်​ပေါ်​စေသည့်​ အာရုံ​ကြော လှုံ့​ဆော်မှုအချို့​ လုပ်ငန်း​ပျက်ကွက်​နေခြင်း​ကို ​တွေ့​ရှိခဲ့​ပြီး​နောက် ယင်း​ကို အ​ခြေခံ ​လေ့​လာကာ ယခုသု​တေသန ရလဒ်အတွက် အ​ဖြေထွက်လာခြင်း​ဖြစ်သည်။ ​ယေး​လ်တက္ကသိုလ်မှ ပညာရှင်များ​သည် ကြွက်များ​တွင် အသုံး​ပြု စမ်း​သပ်ခဲ့​ရာ နီကိုတင်း​ဓာတ်သည် အစာစား​ချင်စိတ်ကို ​လျော့​နည်း​စေပြီး​ ကိုယ်အ​လေး​ချိန်ကို ​လျော့​နည်း​စေ​ကြောင်း​ ​ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့​သည်။
ပညာရှင်များ​က နီကိုတင်း​ဓာတ်သည် ဗဟိုအာရုံ​ကြော စနစ်ကို သက်​ရောက်​စေပြီး​ အစာစား​ချင်စိတ်ကို တား​ဆီး​သည့်​ လှုံ့​ဆော်မှုမျိုး​ ဖြစ်​ပေါ်​စေနိုင်​ကြောင်း​ အတည်ပြုခဲ့​သည်။ ယခုသု​တေသန လုပ်ငန်း​ကို ဦး​ဆောင်သူ တစ်ဦး​ဖြစ်သည့်​ မာရီနာ ပစ်ဆီ​ယော့​တိုက ယခုသု​တေသန ရလဒ်သည် ​ဆေး​ပညာဆိုင်ရာ ​တွေ့​ရှိမှုများ​အတွက် အကျိုး​ဖြစ်ထွန်း​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ခဲ့​သည်။
နီကိုတင်း​ဓာတ်၏ ဦး​နှောက်သို့​ သက်​ရောက်မှုကို ​ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့​သလို အဝလွန်ခြင်း​အတွက် အဟန့်​အတား​ ဖြစ်​စေနိုင်​သော နည်း​လမ်း​တစ်ခုအတွက်လည်း​ အစပျိုး​နိုင်ခဲ့​ကြောင်း​ ၎င်းက ရှင်း​ပြခဲ့​သည်။ ပ​ရော်ဖက်ဆာ မာရီနာက နီကိုတင်း​ကို အ​ခြေခံပြီး​ ​ဆေး​ဝါး​များ​ ထုတ်လုပ်ရန်မှာမူ ဦး​နှောက်သို့​ ​ဘေး​ထွက်အာနိသင်များ​ သက်​ရောက်နိုင်သည့်​အတွက် အကန့်​အသတ် စံညွှန်း​များ​ လိုအပ်​ကြောင်း​ သုံး​သပ်ခဲ့​သည်။
နီကိုတင်း​သည် ထိ​ရောက်​သော ပိန်​ဆေး​တစ်မျိုး​ ဖြစ်နိုင်​သော်လည်း​ အမှန်တကယ် ​ရေရှည်သုံး​စွဲရန်မှာမူ ပိုမိုအ​သေး​စိတ်ကျသည့်​ သု​တေသနပြုမှုများ​ လိုအပ်မည်ဖြစ်​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​သွား​သည်။
ထမင်းစားပြီး ရေချိုးလျှင် ရေဖျဉ်းစွဲသလား
“ဟိုကောင်လေး……. လာစမ်း လာစမ်း။ ခုနလေးကမှ ထမင်းစားပြီးတာကို ရေချိုးရင် ရေဖျဉ်းစွဲလိမ့်မယ်” ဒါဟာ ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျွန်တော့်အဘွား ခဏခဏ ဆူနေကျ စကားဖြစ်ပါတယ်။ စာရှုသူအားလုံးလည်း ကလေးဘ၀က မကြာခဏ ကြားဖူးနေကျ စကားဖြစ်မည်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘာမှမသိနားမလည်တဲ့ ကလေးဘ၀ကတည်းက ကြားနေကျ စကားမလို့ နားထဲစွဲနေပြီး မှန်သလိုလိုတောင် ထင်လာရတဲ့ အထိ လူအတော်များများ ယုံနေကြပါပြီ။ ဒါက နည်းပညာဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ အလှမ်းဝေးခဲ့တဲ့ လူကြီးသူမတွေ မပြောနဲ့၊ ယနေ့ခေတ် (ဆေးလောကထဲက မဟုတ်တဲ့) ပညာတတ်အချို့ကတောင် အမှားအမှန် ခွဲမသိဘဲ အယူသည်း ရှောင်ကြဉ်နေကြတုန်းပဲ။ ဒီတော့ မေးစရာ စကား ရှိလာပါတယ်။ “ထမင်းစားပြီး ချက်ချင်း ရေချိုးရင် ရေဖျဉ်း တကယ်စွဲတာလား”
မဟုတ်ပါဘူး။ လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလိပ်လို Ascites လို့ခေါ်တဲ့ ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း ကိုယ်တိုင်က ရောဂါတစ်ခု မဟုတ်ဘဲ အသည်းရောဂါ၊ နှလုံးရောဂါ၊ ကင်ဆာရောဂါအချို့၊ ကျောက်ကပ်ရောဂါ စတာတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေ နောက်ခံ ရှိနေတဲ့ အတွက် ၀မ်းဗိုက်ထဲ ရေတွေ စုလာကာ ရေဖျဉ်းစွဲရတာ ဖြစ်ပြီး ထမင်းစားပြီး ချိုးလိုက်တဲ့ ရေတွေ သွားစုတာ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်းပါ။
ဒါဆို ဘိုးဘွားဘီဘင်တွေက လွဲချော်နေတဲ့ အချက်ကြီးကို ယုံကြည် လက်ဆင့်ကမ်း ခဲ့ကြတာလား။ အမှားကြီး ပြောခဲ့ကြတာလား။
အဲလိုတော့လဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ထမင်းစားပြီးပြီးချင်း ရေချိုးရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အစာချက်မှု၊ စုပ်ယူမှုတွေမှာ ကြီးစွာသော အနှောင့်အယှက်တွေ ဖြစ်ကုန်တာ သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်တွေ့ရှိ ထားရပါတယ်။ အစာချေတဲ့ အချိန်မှာ သွေးလှည့်ပတ်မှုရဲ့ အများဆုံး ဝေစုကို အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းက စွမ်းအင်ရဖို့ ယူရပါတယ်။ အဲအချိန်မှာ ရေချိုးလိုက်ရင် ကျဆင်းသွားတဲ့ အရေပြား အပူချိန်ကို ထိန်းဖို့ ခြေလက်တွေနဲ့ အရေပြားဆီ သွေးတွေ ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ပို့လွှတ်ပေးလိုက်ရလို့ အူလမ်းကြောင်းကရတဲ့ ဝေစု လျော့နည်းသွားကာ အစာချေမှု အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။ အစာမကြေ လေပွခြင်း၊ မအီမသာ ဖြစ်ခြင်းတို့ ခံစားရတတ်တာကို ရှေးလူကြီးတွေက သိလို့ အကျိုးယုတ်မှာစိုးလို့ တားခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ခက်တာက ရိုးရိုး ရှင်းအောင် ပြောပြီး မတားဘဲ အကြောက်တရားကြီးနဲ့ တွဲပြီး တားခဲ့တာက နောက်မျိုးဆက်တွေ အယူအဆလွဲမှု ဖြစ်စေတော့တာပေါ့။ ဒါကို ကျွန်တော်တို့က သိမြင်ပြီး အနာဂတ် မျိုးဆက်တွေ အတွက် အသိအမြင်မှန်တွေပဲ ချန်ခဲ့နိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါမယ်။ ထမင်းစားပြီးရင် မလုပ်သင့်တဲ့ အခြားအရာတွေကတော့ လမ်းမြန်မြန် ဝေးဝေး လျှောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ လက်ဖက်ရည် သောက်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
(ရှေးလူကြီးတွေဟာ ပုံတိုပတ်စလေးတွေ ဖန်တီးပြီး ကလေးကို ဆုံးမရာမှာ ဖြတ်ထိုးဥာဏ် အင်မတန် ရင့်သန်ခဲ့ကြပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ရင် ခံစားရတဲ့ အမြင့်က သိမ့်ကနဲ ကျသွားတဲ့ ခံစားမှုဟာ အိပ်ပျော်မှု ပုံမှန်မဖြစ်သေးလို့ ခံစားရတဲ့ အိပ်မက်ဆိုးတိုလေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ထမင်းကို ရိုသေတာရယ်၊ အိပ်ရာထဲ မသန့်တဲ့ ခြေထောက်တွေနဲ့ ၀င်လာမှာ စိုးလို့ရယ် ကလေးတွေကို “ထမင်းလုံးတစေ”္ဆ ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရ တီထွင်ပြီး ခြောက်ခဲ့တာ အခုဆိုရင် အဲဒီဝေါဟာရဟာ တကယ်စွဲနေပြီး ယုံကြည်လက်ခံထားမှုတွေ လူအများစုမှာ ရှိဆဲပါ။ ရှေးလူကြီးတွေကို အပြစ်ဆိုစရာ မစဉ်းစားဘဲ ကျွန်တော်တို့ မျိုးဆက်သစ်တွေကျရင် ဘယ်လို အသိသညာတွေ လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့မလဲ ဆိုတာ တွေးထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်)
ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ
၀မ်းဗိုက်ခေါင်းထဲမှာ အ၀ါဖျော့ရောင် (သို့) အကြည်ရောင် အရည်တွေ စုလာခြင်းကို ခေါ်ပါတယ်။ ၀မ်းဗိုက်နဲ့ အဆုတ်၊ နှလုံးတို့ ရှိရာ ရင်ခေါင်းကို Diaphragm ခေါ် ကိုယ်တွင်းခေါင်း ကန့်လန့်ကာ ကြွက်သားနဲ့ ပိုင်းခြားထားလို့ အဆုတ်ထဲ ရေ၀င်တာနဲ့ မတူဘူးလို့ သိထားရပါမယ်။
ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေက ဘာတွေလဲ
ရေဖျဉ်းစွဲခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းက အသည်းခြောက်ခြင်း (Cirrhosis of Liver) လိုမျိုး ဆိုးရွားပျက်စီးနေတဲ့ အသည်းရောဂါ တွေကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဖျဉ်းစွဲတဲ့သူ ၅ ယောက်မှာ ၄ ယောက်ဟာ အသည်းရောဂါကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းခြောက်ခြင်းဟာ အရက်ကို နှစ်ရှည်လများ (သို့) အလွန်အကျွံသောက်သူ အမျိုးသားတွေမှာ ဖြစ်တာများပေမယ့် ငရုတ်သီးမှိုတွေစားပြီး အသည်းရောင်အသားဝါ ဘီပိုး၊ စီပိုး တစ်ခုခု ရှိနေသူ အမျိုးသမီးများလည်း အသည်းခြောက်နိုင်တာ တွေ့ရပါတယ်။ အသည်းခြောက်တယ် ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရဟာ မြန်မာလို အဆင်ပြေသလို ပြန်ထားတာ ဖြစ်ပြီး တကယ်တမ်း ခြောက်သွေ့သွားတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ အရက်၊ ဘီပိုး၊ စီပိုး၊ အသည်းအဆီဖုံးခြင်း စတဲ့ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းတရားတွေကြောင့် အသည်းက ဒဏ်ရာတွေရကာ အဲဒီနေရာမှာ အမာရွတ်တစ်သျှူးတွေပဲ ပြန်ဖြစ်လို့ ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ဖို့ မတတ်နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေကို ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရောဂါသဘောက ပျက်ပြီးသား အသည်းနေရာက ပြန်ကောင်းဖို့ အရမ်းခဲယဉ်းပြီး အသည်းတစ်ခုလုံးသာ ဆက်ပျက်သွားတာမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းပျက်လို့ ပရိုတိန်းတွေ မထုတ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် သွေးကြောတွေထဲက ရေဓာတ်ကို မထိန်းထားနိုင်တော့ဘဲ ရေတွေက ၀မ်းဗိုက်ထဲ လာစုတာ ဖြစ်ပါတယ်။
အသည်းရောဂါ တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ရှောင်တခင် အသည်းလုပ်ငန်းများ ရပ်ဆိုင်းသွားခြင်း (Acute Liver Failure) မှာလည်း ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်တစ်ခုကို ဥပမာပေးရရင် ပါရာစီတမော လွန်ကဲစွာ သောက်မိလို့ အဆိပ်သင့်ခြင်းပေါ့။ အသည်းရဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေ ပိတ်ဆို့သွားတဲ့ ဘတ်ချီရီ ရောဂါစု (Budd-Chiari Syndrome) မှာလည်း ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း၊ အသည်းနဲ့ ဘေလုံး ကြီးလာခြင်းနဲ့ ဗိုက်အသည်းအသန်အောင့်ခြင်းတို့ တွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် အူမကြီးကင်ဆာ၊ ပန်ကရိယခေါ် မုန့်ချိုအိတ်ကင်ဆာ၊ အစာအိမ်ကင်ဆာ၊ ရင်သားကင်ဆာ၊ အဆုတ်ကင်ဆာ၊ သားဥအိမ်ကင်ဆာ စတဲ့ ကင်ဆာအတော်များများက အသည်းနဲ့ ၀မ်းဗိုက်တွင်း ကလီစာတွေကို ပျံ့နှံ့ ရောက်ရှိတတ်ပြီး ရေဖျဉ်းစွဲစေတတ်ပါတယ်။
နှလုံးစွမ်းဆောင်ရည် ကျဆင်းရပ်ဆိုင်းလာခြင်း (Heart Failure) ရောဂါမှာလည်း သွေးကြောတွေထဲမှာ သွေးကောင်းကောင်း ပျံ့နှံ့သွားအောင် နှလုံးက ညှစ်မပို့နိုင်တော့လို့ နောက်ဆက်တွဲ အနေနဲ့ ရေဖျဉ်းစွဲပါတယ်။ Nephrotic Syndrome လို့ ခေါ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ရောဂါမှာလည်း ပရိုတိန်းခေါ် အသားဓာတ်တွေ သွေးထဲကနေ ဆီးစွန့်တဲ့အထဲ ပါသွားပြီး ဆုံးရှုံးကုန်လို့ သွေးက အရည်တွေ မထိန်းထားနိုင်တော့ဘဲ ဗိုက်ထဲမှာ စုကာ ရေဖျဉ်းစွဲစေပါတယ်။
ရှောင်တခင် ပန်ကရိယ ရောင်ခြင်း ( Acute Pancreatitis)နဲ့ နာတာရှည် ပန်ကရိယ ရောင်ခြင်း (Chronic Pancreatitis) နှစ်မျိုးစလုံးမှာ ရေဖျဉ်းဟာ လက္ခဏာတစ်ရပ် အနေနဲ့ ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။ အသည်းရောဂါကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ ရေဖျဉ်းလောက်တော့ မကြီးဘူး ပေါ့လေ။ အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းမှာ ရောဂါပိုး ၀င်ရောက်မှု ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်096;ာ ၀မ်းဗိုက်ရောင်ရင်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ တွေ့နေကျ မဟုတ်တဲ့ ရေဖျဉ်းစွဲရခြင်း အကြောင်းတစ်ခုကို ပြောရမယ် ဆိုရင် လည်ပင်းက သိုင်းရွိုက်အကျိတ် လုပ်ဆောင်မှု နည်းလို့ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း နည်းခြင်း (Hypothyroidism) မှာလည်း မကုဘဲ ပစ်ထားတာ ကြာရင် ရေဖျဉ်းစွဲပါတယ်။ သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်း ပမာဏ ပြန်မှန်သွားတာနဲ့ ရေဖျဉ်းက အလိုလို ပျောက်ပါတယ်။
ရေဖျဉ်းစွဲနေကြောင်း ဘယ်လို အတည်ပြုနိုင်သလဲ
ရေသန့်ပုလင်း တစ်ဝက်စာ (500 ml) လောက် ရှိနေပြီ ဆိုရင်ပဲ ဆရာဝန်က လက်နဲ့ စမ်းသပ် သိရှိနိုင်ပါပြီ။ အရမ်းနည်းနေပြီး မသိသာပေမယ့် ရောဂါအနေအထားကို သုံးသပ်ပြီး ဆရာဝန်က Ultrasound ခေါ် တယ်လီဗေးရှင်းဓာတ်မှန် ရိုက်ခိုင်းရင် သိနိုင်ပါတယ်။
ရေဖျဉ်းစွဲခြင်း သက်သက်ကို ကုသစရာ မလိုဘဲ နောက်ခံ ရောဂါအကြောင်းရင်းကို ရှာကုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အထက်မှာ ပြောခဲ့တဲ့ ရောဂါတွေထဲက တစ်ခုခုပေါ့။ ဥပမာ ကင်ဆာဆိုရင် ကင်ဆာခီမိုဆေး၊ ဓာတ်ရောင်ခြည်စတဲ့ သက်ဆိုင်ရာ ကုထုံးနဲ့ ကုရမှာ ဖြစ်ပြီး အသည်းရောဂါမှာ အသည်းဆေးတွေနဲ့ ကုမလား၊ ခွဲစိတ်မလား၊ အသည်းအစားထိုးမလား စသဖြင့် စဉ်းစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရေဖျဉ်းရှိတဲ့ ဝေဒနာရှင်တွေ အားလုံးကို ရေနဲ့ အငန်ဓာတ် လျှော့စားခိုင်းပါတယ်။ ဆားဆိုရင် တစ်နေ့ကို2g ထက်ပိုစားလို့ မရပါဘူး။ လိုအပ်သလို ဆီးဆေးတွေ ပေးပါတယ်။ အရည်တွေ အရမ်းများရင် ဖောက်ထုတ်မယ်။
အသည်း / နှလုံး / ကျောက်ကပ် စတဲ့ ရောဂါဖြစ်နေတဲ့ အင်္ဂါကို ခွဲစိတ်ကုသဖို့ အရမ်းဆိုးရင် အစားထိုးဖို့ လုပ်ဆောင်ပါမယ်။ ဒါတွေက ဗဟုသုတ အဖြစ်ဖော်ပြတာ ဖြစ်ပြီး ရောဂါတကယ် ဖြစ်လာရင် ဆေးရုံတက် ကုသမှု ခံယူရမှာသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကာကွယ်နည်းတွေကတော့ အထက်ပါ ရောဂါတွေ မဖြစ်အောင် နေထိုင်နည်းတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာတော့ ရေဖျဉ်းဖြစ်ရခြင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူများ အယူလွဲနေမှာ စိုးလို့ အကြောင်းရင်းများသာ ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ရေဖျဉ်းစွဲနေခြင်းရဲ့ အရေးကြီးသော အချက်
၀မ်းဗိုက်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ဖောင်းလာပြီး အရည်တွေ ရှိနေတယ် ထင်ရင် နီးစပ်ရာ ဆေးရုံဆေးခန်းကို အမြန်ဆုံး သွားရောက် စစ်ဆေးပြီး လိုအပ်တဲ့ ကုသမှု ခံယူရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဖျဉ်းစွဲတယ် ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ထဲက ကလီစာတစ်ခုခု ပျက်ယွင်းနေပြီး သွေးထဲက အရည်တွေကို မထိန်းသိမ်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေထိ ရောက်နေပြီဆိုတာ ပြတဲ့ လက္ခဏာတစ်ရပ် ဖြစ်ကြောင်းပါ။
သင့်မှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အမူအကျင့်တွေရှိနေရင် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်နိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တွေထဲမှာ ၇၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ဘ၀နေထိုင်မှုနဲ့ ဆက်စပ်နေပြီး ရှောင်ရှားလို့ ရနိုင်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့အစာ စားတာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာနဲ့ ဆေးလိပ်ရှောင်တာတွေဟာ ရောဂါကို ခုခံနိုင်တဲ့ ပထမခြေလှမ်းတွေပါ။ ဒါ့အပြင် မကြာခင်က ပြုလုပ်တဲ့လေ့လာမှုအသစ်တွေအရ သင့်ရဲ့ဘ၀နေ့စဉ်အစိတ်အပိုင်းမှ အံ့သြဖွယ်ရာနည်းလမ်းတွေနဲ့ ရောဂါမဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တယ်ဆိုတာ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ကင်ဆာရောဂါမဖြစ်အောင် အောင်ပါနည်းလမ်းတွေကို အသုံးပြုကြည့်ပါ။
(၁) ရေဘုံဘိုင်ခေါင်းမှရတဲ့ ရေကိုစစ်ပြီး အသုံးပြုပါ
ဒီလိုအသုံးပြုတာကြောင့် ကင်ဆာရောဂါဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Carcinogen နဲ့ဟော်မုန်းကိုအနှောင့်အယှက်ပေးတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းတွေနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ရေသန့်စင်စက်ကိုအသုံးပြုပြီးဘုံဘိုင်မှ ရေကိုအသုံးပြုတာဟာ ရေသန့်ဘူးတွေလောက် အရည်အသွေးမကောင်းပေမယ့် အန္တရာယ်ပိုကင်းပါတယ်။ ဓာတုပစ္စည်းနဲ့ ထိတွေ့မှုနည်းအောင် ပလက်စတစ်ဘူးတွေနဲ့ ရေထည့်သောက်မယ့်အစား စတီး ဒါမှမဟုတ် ဖန်ဘူးတွေအသုံးပြုပါ။
(၂) ဓာတ်ဆီတိုင်ကီမှာ ဆီပြည့်နေရင် ဆီထည့်တာကို ရပ်လိုက်ပါ
ဆီဆိုင်မှာ ဓာတ်ဆီ ဒါမှမဟုတ် gas ပြည့်နေစဉ် သင်ဝယ်ထားတဲ့ဆီအမှတ်မရောက်သေးဘဲ ဆီတိုင်ကီပြည့်သွားရင် ဆက်မပြည့်ပဲရပ်လိုက်ပါ။ ဆီတွေလျှံကြလာတာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်ပစ္စည်းတွေ လေထဲပျံ့နှံ့သွားနိုင်ကာ သင့်အရေပြား ဒါမှမဟုတ်အဆုတ်ထဲရောက်သွားနိုင်လို့ပါ။
(၃) အသားတွေကို မကင်ခင်နှပ်ထားပါ
အသား၊ ငါးတွေကို မီးသွေးနဲ့ကင်စားရင် အသားကင်ပေါ်က မီးခိုးမှိုင်းတွေမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ Heterocy-clic amines HCAS တွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အသားငါးတွေမကင်ခင်မှာ အနည်းဆုံး တစ်နာရီခန့်ကြိုတင်ပြီး မဆလာနဲ့နှပ်ထားပါ။ မဆလာမှာပါဝင်တဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေဟာ HCAS ကို ၈၇ ရာခိုင်နှုန်းခန့်လျော့ချနိုင်တယ်လို့ Karsas တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာသူတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နေ့စဉ်ကော်ဖီကို ငါးခွက် ဒါမှမဟုတ် ဒါထက်ပို သောက်သူတွေဟာ ကော်ဖီအနည်းဆုံးသောက်သူတွေ ထက်ဦးနှောက်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၄၀ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းတယ် လို့ အင်္ဂလန်မှ၂၀၁၀ အတွင်း လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ နေ့စဉ် ကော်ဖီငါးခွက်သောက်တာဟာ ခံတွင်းနဲ့ လည်မျိုကင်ဆာ လည်းဖြစ်နိုင်ခြေ လျော့ချနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ လက်ဖက်ရည်ဟာ ကော်ဖီလောက်ကာကွယ်နိုင်စွမ်းမရှိဘူးလို့လည်း သုတေသီတွေက ပြောကြပါတယ်။
ရေနဲ့ အခြားအရည်တွေကို များများသောက်တာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အဆိပ်တွေ ဆီးအတွင်းမှာ Dilute ဖြစ်သွားပြီး ဆီးအိမ်မှ မြန်မြန်ထွက် သွားစေတာကြောင့် ဆီးအိမ်ကင်ဆာ ဖြစ် နိုင်ခြေနည်းသွားနိုင်ပါတယ်။ နေ့စဉ် ရေရှစ်ခွက်အနည်းဆုံးသောက်ပါ။
(၆) အစိမ်းရောင် ဟင်းသီးဟင်းရွက် များများစားပါ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကို အစိမ်းရောင်ဖြစ်စေတဲ့ ကလိုရိုဖီးမှာ မဂ္ဂနီစီယမ်များစွာပါဝင်တာကြောင့် အမျိုးသမီးတွေမှာအူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေလျော့နည်းနိုင်ပါတယ်။ အစိမ်းရင့်ရောင်အရွက် တွေကို များများစားပေးပါ။ ချက်ပြီးသား ဟင်းနုနယ်ခွက်တစ်ဝက်စာမှာ မဂ္ဂနီစီယမ် ၇၅မီလီဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ပမာဏရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းပါ။
အခွံမာသီးမှာ ပါဝင်တဲ့ ဆီလီနီယမ်တွေဟာ ဆီးအိမ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျော့ချနိုင်ပါ တယ်လို့ Dartmouth ဆေးတက္ကသိုလ်မှ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ အခြားလေ့လာမှု အရလည်း သွေးတွင်း ဆီလီနီယမ်ပါဝင်မှုများ သူတွေဟာ အဆုတ်နဲ့ အူမကြီးကင်ဆာကြောင့် သေဆုံးနှုန်းကျဆင်းသွားတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆီလီနီယမ်ဟာ Cell တွေကို ဓာတ်တိုးပစ္စည်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရုံမက ခုခံအားလည်း ကောင်းမွန်စေကာကင်ဆာအကျိတ်တွေကို အာဟာရ ပေးမယ့် သွေးကြောတွေမပေါ်ပေါက်အောင်လည်း ဖိနှိပ်ပေးပါတယ်။
(၈) သားမြတ်ကင်ဆာမဖြစ်အောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပါ
လမ်းမြန်မြန်လျှောက်တာလိုမျိုးအသင့်အတင့်လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်ပတ်မှာ နှစ်နာရီလုပ်တာကြောင့် သားမြတ်ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ချနိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန် လုပ်တာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အီစထရိုဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ အဆီတွေ လောင်ကျွမ်းစေတာကြောင့် ဖြစ်နိုင်ခြေလျော့သွားတာပါ။
(၉) အ၀တ်ကို အခြောက်မလျှော်ပါနဲ့
အခြောက်လျော်သန့်စင်ရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ perchloroethylene ဓာတုပစ္စည်းဟာ အသည်းနဲ့ကျောက်ကပ်ကင်ဆာနဲ့ သွေးကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်စောစောပိုင်းက Na-tional Academies Of Science ကသုတေသီတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဆပ်ပြာရည်အပျော့စားနဲ့ အ၀တ်လျှော်ပြီးလေထဲမှာ အခြောက်ခံပါ။ အစွန်းအထင်းရှိနေရင်လည်း ရှာလကာရည်နဲ့ဖျက်ပါ။
(၁၀) လက်ကိုင်ဖုန်း (Cell Phone) ကြောင့် အန္တရာယ်မရှိအောင်
လက်ကိုင်ဖုန်းကို စကားတိုတိုပြောဖို့ ဒါမှမဟုတ် Message ပို့ဖို့သာ အသုံးပြုပါ။ ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း နားကျပ်တပ်ဆင်ပြီးပြောပါ။ လေ့လာမှုတွေအရ လက်ကိုင်ဖုန်း အသုံးပြုသူတွေ ဟာ ဦးနှောက်ကင်ဆာ ဖြစ်နိုင်ခြေများတယ် လို့ တွေ့ရှိထားပါတယ်။
(၁၁) နေလောင်ဒဏ်ကိုအရောင်နဲ့ ကာကွယ်ပါ
သင်အိမ်ပြင်ကိုထွက်ရင် အရောင် ရွေးပြီး ၀တ်ဆင်တာဟာ အရေပြားကင်ဆာကို ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်လို့ စပိန်မှသိပ္ပံပညာရှင်တွေက ဆိုပါတယ်။ အပြာရောင်နဲ့ အနီရောင်အ၀တ် တွေဟာ အ၀ါရောင်နဲ့ အဖြူရောင်အ၀တ်တွေထက် နေရောင်ခြည်ရဲ့ UV rays ဒဏ် သိသိသာသာပိုမိုကာကွယ်နိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဦးထုပ်ဆောင်းဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့။ မှဲ့ကင်ဆာဟာ နေရောင်ခြည်နဲ့ တိုက်ရိုက်ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာ ပိုဖြစ်နိုင်လို့ပါ။ ဦးခေါင်း ဒါမှမဟုတ်လည်ပင်းမှာ မှဲ့ကင်ဆာရှိသူတွေဟာ အခြားနေရာမှာရှိသူတွေထက် သေဆုံးနှုန်းနှစ်ဆပိုများတယ်လို့ North Caro-lina တက္ကသိုလ်က သုတေသီတွေ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ပဋိဇီဝဆေးနဲ့ ဟော်မုန်းဆေးအသုံးမပြုတဲ့ အသားတွေသာ ၀ယ်စားပါလို့ ကင်ဆာအသင်းဥက္ကဋ္ဌက ပြောပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ပိုးသတ်ဆေး အသုံးမပြုထားတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့အသီးအနှံတွေ အသုံးပြပါ ဒါမှမဟုတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်ပေါ် ပိုးသတ်ဆေး အကြွင်းအကျန်တွေ ကုန်စင်အောင် ဆေးကြောပြီးမှ အသုံးပြပါ။ မုန်ညှင်း၊ စတော်ဘယ်ရီ၊ ပန်းသီး၊ မက်မွန်သီးနဲ့ Blueberries တွေမှာ ပိုးသတ်ဆေး အများဆုံးဖျန်းထားတတ်ပါတယ်။ ပိုးသတ်ဆေးမှာ ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းအမျိုးပေါင်း ၄၀ ကျော်ပါဝင်တာမို့ ထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ။
(၁၃) သင့်သားမြတ်သိပ်သည်းဆကို မေးမြန်းပါ
သင်သားမြတ်ကို Mammogram ရိုက်ကြည့်ရင် သားမြတ်သိပ်သည်းဆ ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာကို မေးကြည့်ပါ။ သားမြတ်သိပ်သည်းဆ ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း ဒါမှမဟုတ် ဒါထက်များသူတွေဟာသိပ်သည်းဆနည်းသူတွေထက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်ခြေ လေးဆမှ ငါးဆခန့်ပိုများပါတယ်။ သားမြတ်သိပ်သည်းဆများတာဟာ အီစထရိုဂျင်အဆင့်တွေ များတာကြောင့် ဖြစ်တာမို့ လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ဖို့ အလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်မှ အဆီ Cell တွေ ကျုံ့သွားတာကြောင့် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်တဲ့ Cell တွေ နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
သင်ဟာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံအမျိုးစုံကို များများစားမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများစွာရရှိမှာပါ။ မှန်ပါတယ်။ အချို့ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို လက်တစ်ဆုပ်စာစားရုံနဲ့ ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေရရှိစေနိုင်တယ်ဆိုတာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း လေ့လာ စမ်းသပ်မှု တွေအရ သိရပါတယ်။ ကင်ဆာရောဂါကို အကောင်းဆုံးတွန်းလှန်နိုင်တဲ့အာဟာရဓာတ်နဲ့ အစားအစာတွေကိုရွေးချယ်နိုင်ဖို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
အစားအစာနဲ့ ရောဂါ ကုသကြရအောင်
သင်နဲ့ သင့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဖြစ်များတတ်တဲ့ ကျန်းမာရေး ပြဿနာတွေကို အောက်ပါ အရသာရှိလှတဲ့ အစားအစာနဲ့ ကုသနိုင်အောင် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဟင်းနုနယ်ရွက်မှာ ခေါင်းကိုက်တာ သက်သာစေနိုင်တဲ့ ဗီတာမင် B အမျိုးအစား Riboflavin အများအပြား ပါဝင်ပါတယ်။ ဂျာမန်မှ သုတေသီတွေက Riboflavin ဟာ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ရှိသူတွေကို ခေါင်းကိုက်တဲ့ အကြိမ်အရေအတွက် ထက်ဝက်ခန့် လျှော့ချနိုင်ပြီး ခေါင်းကိုက်ပျောက်ဆေး သောက်ရတဲ့ အရေအတွက် လျော့နည်းစေတယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ Riboflavin ဟာ ရေမှာ ပျော်ဝင်တဲ့ ဗီတာမင် B ဖြစ်တာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာ သိုလှောင် သိမ်းဆည်းထားနိုင်မှု မရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့် နေ့စဉ် အစိမ်းရောင် ဟင်းရွက်တွေ စားပေးပြီး ဗီတာမင် B (Riboflavin) ရရှိအောင် ရယူပါ။
အမေရိကန်မှ သုတေသီတွေက ကြက်သားနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက် စွပ်ပြုတ်ရည် သောက်တာကြောင့် ရောင်ရမ်းမှုကို လျှောချနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်ရှိပြီး အအေးမိဝေဒနာ သက်သာနိုင်တယ်လို့ တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ခံတွင်းအနံ့ သန့်ရှင်းနေအောင် ဒိန်ချဉ်သောက်ပါ။ နို့ထွက်ပစ္စည်းကို နေ့စဉ် သောက်တာကြောင့် ပါးစပ်အတွင်း ခံတွင်းနံ့ နံစေတဲ့ ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဖိုက် အဆင့်တွေ လျှော့ချနိုင်ပါတယ်လို့ ဂျပန်မှ သုတေသီတွေက တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရိုးရိုး ဒိန်ချဉ်သာ သောက်ပါ။ သစ်သီး ပါဝင်တဲ့ ဒိန်ချဉ်တွေမှာ အချိုဓာတ် ပိုကဲတာကြောင့် သွားပိုးစားစေနိုင်လို့ပါ။
စမုန်စပါးမှာ ဗိုက်ပွတာ၊ ဗိုက်နာတာ၊ လေပွတာ၊ ပျို့တာနဲ့ ရင်ပူတာတွေကို သက်သာစေနိုင်တဲ့ Anti-spassmodic ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ ဒြပ်ပေါင်းတွေ ပါဝင်လို့ပါ။ အစာစားပြီးတိုင်း စမုန်စပါး ဝါးစားပါ။
အညိုရင့်ရောင် ချောကလက် စားပါ
အညိုရင့်ရောင် ချောကလက်က အနည်းဆုံး နေ့စဉ် တစ်စိတ်စားတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ လိင်စိတ် တက်ကြွမှု ရှိတာဟာ ချောကလက်မှာ ပါဝင်တဲ့ စိတ်ခံစားမှု ကောင်းစေတဲ့ ဓာတုပစ္စည်းကြောင့်ပါလို့ အာဟာရပညာရှင် Dr.Joanna McMillon က ပြောပါတယ်။
ရင်သား​ကြီး​ထွား​လိုသည့်​ မ​လေး​ရှား​အမျိုး​သမီး​ အသည်း​ကွဲဇာတ်လမ်း​ကြုံ
ရင်သား​ကြီး​ထွား​လို၍ စမ်းသပ်နေပုံ​© dailymail
မ​လေး​ရှား​နိုင်ငံမှ ရုံး​စာ​ရေး​ အမျိုး​သမီး​တစ်ဦး​သည် ရင်သား​ကြီး​ထွား​ရန် ခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့​ပြီး​နောက် နှစ်ခါနာရသည့်​ အဖြစ်မျိုး​ ကြုံ​နေရ​ကြောင်း​ သိရသည်။
သူမသည် ချစ်သူ၏ စွန့်​ခွာမှုကို ခံရပြီး​နောက် ရင်သား​ကိုလည်း​ ဖယ်ရှား​ ဖြတ်ထုတ်ရမည့်​ အ​ခြေအ​နေနှင့်​ ရင်ဆိုင်​နေရသည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်ရှိပြီး​ သမ်ဟုသာ မည်​ဖော်ပြ​သော အမျိုး​ သမီး​သည် သူမ၏ချစ်သူ သ​ဘောကျ​စေရန် ရင်သား​ခွဲစိတ်မှု ခံယူခဲ့​ခြင်း​ဖြစ်သည်။ သူမ၏ ချစ်သူက သူမအား​ ယခုထက် ပိုပိန်၍ ရင်သား​ပိုကြီး​စေလို​ကြောင်း​ မကြာခဏ ​ပြော​လေ့​ရှိသည်။
လွန်ခဲ့​သော ၂ လကမူ သမ်သူ သူမ​နေထိုင်ရာ ဖာဟန်မှ ကွာလာလမ်ပူသို့​ သွား​ရောက်ပြီး​ ဆရာဝန် တစ်ဦး​နှင့်​ ​တွေ့​ဆုံခဲ့​သည်။ ထို့​နောက် ရင်သား​ခွဲစိတ်မှုကို ခံယူခဲ့​သည်။ သို့​သော် လက်ရှိတွင် သူမ၏ ခွဲစိတ်ထား​သော ရင်သား​အတွင်း​ ပိုး​ဝင်မှု​ကြောင့်​ ရင်သား​တစ်ခုလုံး​ ဖြတ်ထုတ်ရမည့်​ အ​ခြေအ​နေမျိုး​ ကြုံ​နေရသည်။ သမ်၏ ချစ်သူမှာလည်း​ သူမအား​ ရင်သား​ခွဲစိတ်မှုအတွက် ​ငွေအ​ မြောက်အမြား​ သုံး​စွဲသည်ဟုဆိုကာ ​ဒေါသတကြီး​ လမ်း​ခွဲသွား​ခဲ့​သည်။
သမ်သည် ခွဲစိတ်မှုအတွက် ရင်း​ဂစ်​ငွေ ၁၃၀၀၀ ​ ကျော် ကုန်ကျခဲ့​သည်။ ​လော​လောဆယ်တွင် သမ်သည် ရင်သား​များ​ ပိုး​ဝင်မှု​ကြောင့်​ ဗျာများ​လျက်ရှိသည်။ ခွဲစိတ်ပြီး​ ၁ ပတ်မျှ အကြာကတည်း​က ရင်သား​များ​ ​ရောင်ရမ်း​ကာ ညိုမည်း​သွား​ခဲ့​ကြောင်း​ သူမကဆိုသည်။
သူမ၏ ကိစ္စနှင့်​ ပတ်သက်၍ တရား​ရုံး​က ထိုခွဲစိတ်မှုသည် တရား​ဝင် လုပ်​ဆောင်ခြင်း​ မဟုတ်ဟု ယူဆရ​ကြောင်း​ ​ပြောကြား​ထား​သည်။ မ​လေး​ရှား​တွင် ရင်သား​ပြင်ဆင်မှုကို တရား​မဝင်ဘဲ ခွဲစိတ်လုပ်ကိုင်မှုများ​ ရှိ​နေ​ကြောင်း​လည်း​ သိရှိရသည်။